दिनहु लसुन र महको मिश्रण बनाइ खादा हुन्छन् यस्ता अचुक फाइदा !! | सुदुरपश्चिम खबर
दिनहु लसुन र महको मिश्रण बनाइ खादा हुन्छन् यस्ता अचुक फाइदा !!
यी दुबैलाई रोगहरूको उपचारको लागि सबैभन्दा पुरानो औषधी मानिन्छ।यिनीहरुमा पाइने एन्टिबायोटिक, एन्टिफंगल र एन्टिअक्सीडेन्ट गुणहरूले हाम्रो शरीरलाई थुप्रै रोगहरूबाट जोगाउँछ।
एक चम्चा मह लिनुहोस् र त्यसमा पिसेको लसुन मिक्स गर्नुहोस्। यसको लागि लसुनको मात्रा २ वा ३ पोटि राख्नुहोस्। अब यो मिश्रण एक गिलास मनतातो पानीमा मिलाएर सेवन गर्नुहोस्। नियमित रूपमा ७ दिन यसको सेवन गरेर तपाईले यसको फाईदा लिन सक्नुहुनेछ।
यदि तपाईको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर छ भने तपाईको शरीरलाई धेरै प्रकारको रोगहरूले सताउछ । त्यसैले, प्रतिरक्षा शक्ति बलियो बनाउनको लागि एक किलो लसुन र दुई लिटर मह मिसाएर यसको मिश्रण तयार गर्नुहोस् र त्यसलाई दैनिक रूपमा उपभोग गर्नुहोस्। यसमासमावेश एन्टिबायोटिक गुणहरू तपाईको शरीरमा सुपर पावरको रूपमा काम गर्दछ।
यस मिश्रणले तपाईंको हृदयसम्म पुग्ने धमनीहरू भण्डार भएको बोसो हटाउन मद्दत गर्दछ। यसले रक्त संचारले सजिलैसँग काम गर्दछ, मुटुको रोगको जोखिम कम गर्दछ।
लसुन र महबाट बनेको यो मिश्रण अतिसारको समयमा राम्रो प्राकृतिक उपचार हो। यसको सेवनले पाचन प्रणाली ठीक रहन्छ, जसको कारणले पेट सम्बन्धि संक्रमण कम हुन्छ।
प्राकृतिक गुणको धनी यो मिश्रण एक प्राकृतिक डिटोक्स मिश्रण हो, जसको सेवनले शरीरका विषाक्त पदार्थहरू र दूषित पदार्थहरू हटाउँदछ र हाम्रो शरीरलाई पूर्ण रूपमा स्वस्थ राख्छ। यसको सेवनले अन्य विकारहरू हुने सम्भावना पनि कम हुन्छ। (gnewsnepal बाट सभार)